H.264 Editor: Sida loo Edit H.264 Files
> Resource > Video > Sida loo Edit H.264 Files
Ma waxaad doonaysaa qalab smart in taageeri karaan faylasha H.264 si aad u wanaagsan? Wondershare Filmora (Originally Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waa doorashadaada haboon inuu xaalkaa H.264 Files. Tani editor caqli H.264 galinaysaa dhammaan qalabka tafatirka aad u baahan tahay ee aad faraha ka. Just jiidi aad files H.264 doonayay in app iyo guji mid ka mid ah shaqada walxood oo aad rabto in ay interface dareen leh. Murayaad u dhigma ama suuqa kala furi doonaa oo waxaad ku dhameysan ha shaqo tafatirka goobtii.
Iyadoo app fududahay in la isticmaalo, waxa aad edit karaa files H.264 by falinjeeerka, lana siii, biirtay, qoqobada, isagoo intaa ku daray music soo jeeda, qabsado saamayn video sida la barbardhigo, Saturation, iyo iftiin iwm iyo kala guurka Rich, Inro / Credit, PIP iyo kheyraad kale sii dayn doonaa inaad retouch aad videos.
Hadda, dejisan iyo rakibi this editor H.264 weyn in xaalkaa faylasha aad. Ka hadda bilowday.
1 Import H.264 files si album this H.264 file editor ee
Riix ah "Import" button keeno dhammaan faylasha H.264 aad rabto in aad album User ee. Haddii kale, waxaad u soo jiidi kartaa jeedi, kuwaas oo files H.264 bartilmaameed ka your computer si album ah.
2 Jiid H.264 files si Timeline ee tafatirka
Jiid aad files H.264 uu ka rabo album this app ee ay Timeline. Oo markay aad u samayn, saasaa idinku khayr badan kuwaa lahaa ka album in ay wakhtiga mid mid. Taasi waxa ay samaysay si looga fogaado gelinaya mid file kale oo yeelan kara kala file labaad.
3 files Edit H.264
Dooro mid ka mid video clip on Timeline ka dibna riix badhanka Edit in la furo guddiga tafatirka, halkaas oo aad noola, jar, shaandheyn video, isbedel video saamayn iyo xawaaraha ee video bar, iyo edit track audio in bar Audio.
Si aad u jar video clip ah in dhererka cayimay, kaliya waxaa iyo mouser guji ka badan ay ku laayeen midig ama bidix.
Haddii aad rabto in aan kala tagno video clip ah, kaliya waxa ay ka dooro adigoo gujinaya, jiidi sare ee cas Time Tusiyaha in mar kasta oo aad rabto, ka dibna ku dhuftay "maqas" icon.
4 dhoofinta abuurkiinna
Saxaafadda "Abuur" button in arbushin ilaa uu furmo suuqa wax soo saarka, halkaas oo aad u baahan tahay si ay u tagaan "qaab" category iyo dooro "MP4" format. Haddii aad u sii wadaan "goobaha Advanced" doorasho, waxaad arki kartaa in ay encoder waa H.264 Qeexid Sare. Taasi waa. Hit ah "Abuur" badhanka mar kale inay u dhoofiyaan file cusub H.264.